UJennifer Lopez wagxila eHinntons no-Alex Rodriguez kanye nezingane
Kubonakala sengathi umculi oneminyaka engu-47 ubudala nomlingisi uJachel Lopez, ukuphila komuntu siqu kuthuthuka kancane kancane. Inanethi nesoka lakhe lamanje u-Alex Rodriguez liyathuthuka ngokushesha futhi, ngokusobala, abadumile banelisekile ngalesi sifundo sobuhlobo. Izolo, i-paparazzi yakwazi ukulungisa amakhamera abo uJennifer nabantwana no-Alex, lapho befika eholidini eHalls.
U-Alex Rodriguez noJennifer Lopez nabantwana
Ungahamba ngaphandle kokwenza kanye nezithende
Idolobha laseHlinktons lijwayele abantu abaningi baseMelika. Kungamahora ambalwa ukusuka edolobheni laseNew York futhi ethandwa kakhulu ngabaninimali, amabhange kanye nezinkanyezi ze-movie, bonisa ibhizinisi. Njengoba, cishe, abaningi baqagela, kuleli dolobha laseLopez kunendlu. Pogostit kuwo, ukuba abe jeans kanye flip-flops, ukukhohlwa izithende, hhayi ukwenza make-up futhi eyinkimbinkimbi yekhanda - isifiso ukuthi Jennifer ngempumelelo benza le ngempelasonto.
U-Alex Rodriguez noJennifer Lopez bahamba behamba nge-Hamptons
Umculi oneminyaka engu-47 ubudala wangena kuma-lens abathwebuli bezithombe, ngokushesha nje lapho efika eHalls. Wayembethe i-jeans eluhlaza okwesibhakabhaka enezinyosi eziphakeme nasemigodini ethangeni lakhe, kanye nesifungo esimhlophe esifushane. Inkanyezi yesiteji yahlanganiswa nama-moccasins alula, isikhwama esincane esimnyama namacici. Ngokuqondene nokwenza izimonyo, yenziwa ngemibala yemvelo, futhi izinwele zazisuswa zibe yi-gullet encane. Umngane wakhe uRodriguez naye wayebukeka ekhululekile kakhulu. Le ndoda yayihamba emigwaqeni e-T-shirt eyi-gray, izinqamuleli eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye nama-sneakers ambala. Ngokuqondene nabantwana bakaJennifer, indodakazi ka-Emmy yayigqoke ukukhanya okulula okukhanyayo kanye ne-flip flops, kanye nendodana kaMax ekhanda elimhlophe kanye namashothidi enemibala yesinaphi.
UJennifer Lopez nendodakazi ka-Emma
U-Taylor Swift okokuqala ngqa eminyakeni emibili yanyatheliswa
UJennifer Lopez uthengisa izingubo zakhe ngeMat Gala 2018
UJennifer Lopez wamangaza abalandeli ngendlela engavamile ngengubo ebomvu
U-Lopez akayithandi i-paparazzi
Ngenxa yokuthi izakhamuzi zaseHittons ziyizinkanyezi eziqinile, iziphathimandla zendawo zenze umyalelo, ngenxa yokuthi ukudubula edolobheni ngaphandle kwemvume ezindaweni eziningi kuvunyelwe. Naphezu kwalokhu, kunezindawo zomphakathi, isibonelo, imigwaqo lapho ungadla khona. Yilapho abathwebuli bezithombe futhi "bazingela" abadumile. Lapho ebona omunye wabo, uLopez wahlangana nabantwana bakhe nabathandekayo lapho efika kuleli dolobha. Ebhekene nenkulumo ebusweni bakhe, wayengathandi iqiniso lokuthi wayethwebula izithombe.
Lopez nezingane kanye noRodriguez
Ngandlela-thile kwelinye lalabo abaxoxisana naye uLopez wathi amazwi afana ne-paparazzi:
"Angikwazi ukusho ukuthi laba bantu benza ukuphila kwami ​​kukhululeke futhi kungenasici. I-paparazzi yinkinga enkulu yomphakathi, engingathanda ukulwa nayo. Wonke umuntu kufanele abe nokuphila komuntu siqu, kodwa abathwebuli bezithombe abasiniki ithuba elinjalo. Kungani kufanele ngaso sonke isikhathi ngiphenduke futhi ngicabange ukuthi manje othile uzogijima kimi ngekhamera futhi avule eduze kwamehlo ami? Lokhu akujabulisi kakhulu. "
UMariakarla Boscono noBella Hadid banikeze iqoqo elisha lempahla yokugqoka i-Givenchy
UDuke Hugh Grosvenor ushiye uhlu lwabaphathi be "bakhululekile nabacebile" baseBrithani!
Akumangalisi futhi adideke? U-Anna Kendrick uyavuma ukuhalalisela ngokuzalwa kwamawele u-Anna Kournikova
UBretney Spears ushicilele ividiyo ye-acrobatic nesoka lakhe
U-Bella Hadid ugxeke ngokuphuza utshwala ebhentshini
IKhaya Gerber yavela emakhasini omagazini ka-Okthoba we-Interview
Kufanele ngilindele umshado kaPhoebe Tonkin noPaul Wesley?
U-Adele ku-Grammy "uqinisekise" ukuthi ushadile
I-Plantex yabantwana abasha
Izinwele zezingane zezinwele ezinde
Ikati yayinobuthi - okufanele ukwenze?
I-Muslim Burinka Swimsuit
Indlela yokuziphatha eGibhithe?
I-hemoglobin ephakanyisiwe - izimbangela kanye nokwelashwa kwabesifazane, amadoda nabantwana
Isifo sikaBarrett - izimpawu kanye nokwelapha
Uhlobo oluncane kakhulu lwamakati
Amashiya abesifazane asehlobo
Ungayithola kanjani umsebenzi ngaphandle kokuthola ulwazi?
Amafutha ngamalungu amadolo
Izitayela zaseRashiya zamakati amantombazane
Inhloko yami ivuleka - ngingenzani?